Ny fitodika mpanao ao aminny fitsipiteny sy haiteny malagasy araka anjara asa dia ny fitodiky ny fehezanteny mivany telo fara-fahakeliny ka misy tovona mi-, man-, maha -, sns ny matoanteny, ary mitana anjara asa mpanao ny lazaina.
Ny fitodika ata ao amlinny fitsipiteny sy haiteny malagasy araka anjara asa dia ny fitodiky ny fehezanteny ahitana vaniny roa fara-fahakeliny ka ny matoanteny dia misy tovona a- ary ny lazaina dia mitana anjara asa atao.
Ny hasin-teny dia ny singa farany kely indrindra ao aminny teny iray izay misy heviny nefa tsy azo zaraina ho singa kely indrindra mbola hisy hevitra. Ny hasin-teny iray dia mety ho fototeny na kianteny na tsirinteny. Ny hasin-teny iray dia mety ...
Ny mari-pana dia toetra ara-batana ao amin ny zavatra izay maneho hafanana sy hatsiaka. Izy io dia ny fisehoan ny angovon-kafanana, misy amin ny zavatra rehetra, izay loharanon ny fisian ny hafanana, fikorianan ny angovo, rehefa mifandray amina v ...
Ny hominide dia izay biby mandeha aminny tongotra roa rehetra. Ny tena mampiavaka azy dia ny tsy ananany rambo eo aminny vatany. Ny fikarohana farany mombanny fisokajiana dia asehonny sary ka ny olombelona dia ao anatinny sokajy aminny ankavia in ...
Ny liona dia karazana ao aminny fianakaviana Felidae ary mpikambana ao aminny biby. Mahafantatra indrindra ny hozatry ny hozatry ny fony sy ny fony lalina, fohy, boribory, lohany boribory, sofina boribory ary tadivavarana volo eo aminny faranny r ...
Ny rafitra presbiteriana sinôdaly dia rafi-pitantanam-piangonana izay tsy hita afa-tsy ao aminny fiangonana protestanta, indrindra ao aminireo fiangonana nohavaozina. Ahitana dingana roa ao aminizany rafitra izany, dia ny dingana ao aminny fiango ...
Ny sorona masina na lamesa dia fotoam-pivavahana kristiana izay anatanterahanny pretra ny fankalazana ny soronny eokaristia izay famerenana indray ny sorom-panavotana nataoni Jesoa Kristy. Io no vovonana fara tamponny litorjia kristiana, indrindr ...
Ny hazomanga dia tsato-kazo roa na telo mifanakaiky, atsatoka aminny toerana iray, izay atao hanatanterahana fianianana na sorona na fitsofan-drano. Ny mpitan-kazomanga no miandraikitra ny fikarakarana ny zavatra atao eo aminny hazomanga. Famanta ...
Ny Simhat Torah dia fety jiosy ankalazana ny Torah ka itondrana am-pilaharana ny horonam-boky mirakitra azy. Tanterahina aminny 22 sy 23 Tishri izany fety izany.
Ny rijan-kevitra na rijankevitra dia vondrom-panazavana na vondron-kevitra mirindra momba ny lohahevitra mazava iray, izay mety hahitana lalàna sy petra-kevitra, notsoahana avy aminny fandinihana ny angon-java-mitranga, avy aminny fanandramana na ...
Ny Nazôreana na Nazareana dia vondrona ara-pivavanana jodeô-kristiana tsy dia fantatra loatra, izay fanta-pisiana tamin ny taonjato voalohany. Ity vondrona ity dia manaiky an i Jesoa ho Mesia nefa manaja ny lalàm-pivavahan ny Jiosy. Tsy mino ny m ...
Maro ny vondronolona antsoina aminny anarana hoe Nazareana na Nazoreana na Nazarena. Mety manondro ny mpanaraka ny mandeisma izay sekta gnostika nanandratra ani Joany Batista nefa nanambany ani Jesosy izay heveriny ho mpaminany sandoka koa ny hoe ...
I Maria Magdalena na Maria Madelena na Maria avy any Magdala dia vehivavy resahina ao aminny Testamenta Vaovao izay nafahani Jesosy taminny fangejanny demony sady isanny nisehoany taorianny nitsanganany taminny maty sady nampandre koa ny mpianatr ...
Philippe Mélanchthon dia mpanao asa soratra ary teôlôjiana alemàna, teraka ny 16 Febroary 1497 ary maty ny 19 Aprily 1560. Manana ny mari-pahaizan ny dôktera an-teôlôjia izy sady nampianatra tamin ny oniversite, mpianatr i Martin Lotera, sady fan ...
Ny Zezoita na Fikambanan i Jesoa dia fikambanan-drelijiozy katôlika izay natsangan i Md Ignace de Loyola niaraka tamin i Md François Xavier ary i Md Pierre Favre, tamin ny taona 1534 ary nankatoavin ny papa Paoly III tamin ny taona 1540, tsy ahit ...
Ny Mishnah na Mishna na Misnà dia ny fanangonan-dalàna am-bava jiosy voalohany sady literatiora rabinika voalohany. Taminny taonjato faha-3 taor. J.K no nanaovani Juda Hanassi ny fanangonana, izay voasoratra taminny teny hebreo, afa-tsy andininy ...
Ny sora-madinika na soramadinika dia endriky ny litera mateti-piasa indrindra ao aminny fanoratana ka aminny ankapobeny soratana aminny endrika madinika kokoa. Ny mifanohitra aminy dia ny sora-baventy izay endrika tsy maintsy anoratana ny litera ...
Ny tendro kambana ‹ ◌̈ › dia mari-tsoratra ao aminny abidy latina sy ny abidy grika sy ny abidy sirilika ary ny maro hafa koa, izay miendrika teboka milahatra marindrano izay apetraka eo amboninny litera tiana hasiana azy. Ohatra: ä, e, ö, ü, ÿ
Ny tendro miraika havia ‹ ◌̀ › dia mari-tsoratra ao aminny abidy latina sy ny abidy grika sy ny abidy sirilika ary ny maro hafa koa, izay miendrika tsipika kely soratana avy ambany mianambony sady misompirana miankavia ary apetraka eo amboninny l ...
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386